Mgbe Thijs H., ụgwọ Edith Schipper maka njide a na-ahụ anya, jụrụ na ụlọ ọrụ mbụ, onye ọ bụla ga - anabata ya: Martin Vrijland
Mgbe Thijs H., ụgwọ Edith Schipper maka njide anya, jụrụ na ọchịchị gara aga, onye ọ bụla ga-anabata ya
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 9 Ka 2019	• 9 Comments
Ndi mmadu adighi njikere. Otu arịrịọ site na saịtị a meriri ihe odide ise nke ise megide iwu Edith Schippers n'okpuru akuko Rutte gara aga. Na nchịkọta, ụgwọ ahụ pụtara nnọọ nke ukwuu na ndị enyi gị, ndị agbata obi ma ọ bụ ezinụlọ gị ahụ ike kwesịrị ịkpọ iji jide n'aka na a ga-atụba gị na sel nkewa maka nchọpụta. Ị nwere ike ịgụ ya ọzọ. Mgbe ogbugbu nke Thijs H. (nke anyị naanị nyocha 1 ya na ugogbe anya uzo na mgbasa ozi, onye Thijs H. gaara ebi na ihe na-erughi izu abụọ na onye ga-ejide ya na-egwu na ọnụ ụzọ ịsa ahụ) na ndị na-ahapụ nkịta ha, onye ọ bụla ga-anabata iwu a.
Gịnị bụ ụgwọ ahụ mgbe ahụ? Were anya:
An chọpụtara ụfọdụ ga-eme ka o kwe omume na-edebe onye 3 ụbọchị - na mgbe na-eme bụrụ na ọmụmụ na ịkpọ ndị ezinụlọ / ikwu - ma ọ bụrụ na e nwere nnọọ ike enyo na o nwere a oké njọ echiche aghara na e nwere a enyo na otú emerụ mmadụ n'onwe ya ma ọ bụ gburugburu ebe obibi ya. Ka ihe atụ, ike ndọda nke ize ndụ nwere ike kpebisie na, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ka a na ihe mberede ụfọdụ, ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ ụdị enyemaka nwere ike ji mee. Ọ dịghị ọgwụgwọ ọ bụla dị na nyocha ọhụụ.
Na mgbakwunye, Iwu a na-eme ka o kwe omume na a ga-enye nlekọta mmanye tupu oge nsogbu nke 18 awa. Ihe a na-eche banyere nsogbu ndị ọ na-egosi na a ga-enwe nsogbu, mana ebe nchịkọta nke onwe ya ka na-ewe oge. Na atụmanya nke iwebata nke a, ọ ga-adị mkpa iji gbochie onye nwere nchegbu na nnwere onwe ya ma ọ bụ inye ọgwụ iji mee ka ọ dị jụụ ma mee ka ọnọdụ ahụ nwee ike ịgwọ ọzọ.
"Ọfọn dị mma, n'ihi na anyị achọghị ụdị igbu ọchụ site n'ụdị dị ka Thijs H. na onye ọ bụla ka na-echeta Anne Faber (ọ bụghị ichefu igbu ọchụ nke onye Belgium bụ Julie van Espen)". Ekwerela Martin Vrijland akpan akpan. Onye na-eche echiche ọjọọ na-agba mbọ ime ka ị kwenye na ị nwere ike iji PsyOps na-arụ ọrụ Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta ọnụ. Nke ahụ pụtara nke ukwuu na ị na-ere nsogbu (nsogbu) nke isi mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na mgbasa ozi. Maka nke a, o nwere ike ịme ihe niile nke ma ndị ọrụ ma ọ bụ ndị nwere nkwarụ, kamakwa (na ma eleghị anya,) ihe odide ndị gbara ọkpụrụkpụ (gụnyere ihe ngosi vidio).
Ndi mmadu ole na ole ga-eche na iwu TBS ka emebechara mgbe ikpe Anne Faber; ruo mgbe anyị ghọtara na anyị nwere ike ịnakwere ihe dịka ihe merenụ na ndị ọgba aghara n'okpuru Soviet Union; ndị na-emegide ọchịchị ahụ bụ ndị e kpochapụrụ na goldg. Ugbu a ị nwere ike ọ gaghị emegide ọchịchị ahụ, ma chere ruo mgbe ị ga - ekwenyeghị na ụfọdụ ndị nne na nna ma ọ bụ (na nso nso) nsogbu dị mkpa dịka ịgba ọgwụ.
M na-enyo enyo bụ na nke a Thijs H. mere ka ndị mmadụ site na Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta nkwupụta ga-akwadebe maka ịnakwere iwu ahụ Edith Schippers na-esitebeghị. Ihe a na-ekwu bụ na a na-agwọ Thijs n'ụlọ ọgwụ GGZ. Chee okwu m na n'azụ a achọpụtala na ọ bụrụ na ndị agbata obi ma ọ bụ ndị enyi nwere ike ịkpọ ọgwụ ahụ, a gaara egbochi nke a. Maka nke ahụ, naanị anyị ga-echere mkparịta ụka Nieuwsuur, DWDD, Pauw na Jinek na ndị ọkachamara nabatara ọnọdụ a nabatara. Ekwesighi iburu n'uche na iwu a nwere ike imetụta onye ọ bụla nakwa na ọrụ nlezianya nwere ike ịdọrọ ọtụtụ ndị mmadụ gaa na goldg (n'enweghị enyemaka nke onye ikpe ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa uche). I nwere ike ime nke ahụ ma ọ bụrụ na ọ gafeela. Na ndị nọọsụ enweela ọzụzụ. Ọfọn, ị ga-abụ na ọ bụghị dissident.
Mbido Anne Faber na-enweta dịka ọ na-atụ anya ọzọ TBS na-enweghị nyocha psychiatric
Tags: Edith, agba, GGZ, Ogbugbu ndi mmadu, ụmụ nkịta, ụlọ ọgwụ, egbu egbu, ọhụrụ, nsogbu, nyocha, mmeghachi omume, Schippers, ngwọta, Thijs, ndị na-aga ije, mmiri, iwu, ụgwọ
9 May 2019 na 21: 23
Ee, Pita R de Vries bụkwa eziokwu, De Dwangbuis: ị na-echeta
Ị nwere echiche dị iche ?? : "Mgbe ahụ ị ga - ewepụ gị"
ỤLỌ ỤLỌ ỤBỤ AKA
Ugbu a, onye ọ bụla maara na Wim Dankbaar aghaghị ịnọgide na-enwe akụkọ Vaatstra (n'ezie Psyopp), ma ọ rụpụtara ọrụ na Pita iji mee ka ọ gaa n'ihu.
N'ihi na Wim ga-eme ihere ma ọ bụrụ na ikpe ahụ bụ "enweghị" mmụọ.
Na nke ahụ, a pụghị ịsị na ọ dị mfe, ma wimmetje ma ọ bụ eziokwu
9 May 2019 na 22: 14
"Ndị nọọsụ amalitela ịzụ ihe."
Haha, egwu. Akụkụ nke mgbaghoju anya ahụ na-adaba ọnụ n'ụzọ mara mma.
10 May 2019 na 06: 55
Kedu ihe doro anya ị chọrọ ka ndepụta ụlọ ọrụ na aghụghọ na-arụ ọrụ na ntinye iwu Edith Schippers?
10 May 2019 na 19: 17
Thijs ... na-agbanye aka na-emechi emechi ma gbalịa ịgbapụ mgbe e mesịrị?
10 May 2019 na 21: 19
Nke a metụrụ m aka ozugbo, ozugbo ị ghọtara otú o si arụ ọrụ, ọ doro anya otú e si akpọ ya.
Ị na-echekwa na ihe na-ezighị ezi na ụdị akụkọ a, ọ bụrụ na ị na-amụtụ anya ma ọ dịkarịa ala.
O yikwara ka ha adịghị anwa anwa ime ya ka ọ bụrụ eziokwu.
Dị ka a ga - asị na ha na - agbalị ịmepụta ihe oyiyi ahụ na - enwere ọnyà na - egbu egbu ebe nile ... ndị na - egbu ndị mmadụ ...
11 May 2019 na 08: 19
Akwụkwọ akụkọ nke mgbagwoju anya Netherlands
11 May 2019 na 11: 48
Anyị na-agagharị na ya, ka iwu Edith Schipper nwee ike nweta ya
11 May 2019 na 11: 56
Anyị na-enyekwa ya ihe ngosi ihe nkiri ọzọ, nke mere na a pụrụ itinye ego ọzọ na goldg:
11 May 2019 na 19: 40
Naanị ya, ị ga-enwe mgbagwoju anya.
Ndị na-eche echiche, ndị nkatọ, ndị na-eche echiche na-esiteghị na igbe ndị ị na-eme n'oge na-adịghị anya.
Nyere mba nile aka ka idebe ndi mmadu na-egbu ndi mmadu na ndi ogbugbu, ndi ozo na ndi na-eyi egwu egwu! N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ agbanweela na Netherlands, ma ọ bụ ihe ngosi ahụ adịghị na ya. Kedu oge anyị bi na mba dị ize ndụ? Mgbe ọ bụla, ihe nwere ike ime. Ma ọ bụghị na gaypride ma ọ bụ ụbọchị eze ahụ, e nwere ihe ọzọ, ọbụna ndị na-egbu ọchụ, ndị uwe ojii, na ndị ọzọ nwere obi ụtọ ma jiri obi ụtọ na-enwe obi ụtọ.
" Nzọụkwụ ọzọ nchekwa net: Patrick Savalle nkwekọrịta N'ezie site na Café Weltschmerz (ihe nakawa etu esi nke n'ịghọ aghụghọ ule)
Oge iji wepu ebe a? Kwado 15-05-2019 »
Nleta nile: 12.333.453